The Yemberi Trip Lee — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndicho chikonzero gore rapera ndakanyora The Life Good, bhuku dives udzamu shoko shure kwangu rekodhi chimwe chete rokuti. Zviri Ndokusaka ndakazvizivisa wokupedzisira kuwa kuti ndingadai rirege vaifamba zvikuru sezvo zvikuru sezvo ndave. Ndinoda kudzidza kuva mufundisi akatendeka, uye kuti zvinogona chete zvechokwadi panotaurwa chechi yeko. Saka ndiri kutora nguva kushandisa pakudzidza kubva vafundisi okuzvipira vekusvondo vangu Washington, DC. Ishe vachitendera, sezvo ini kushumira patsvimbo kuchechi, Ini Uchakwanisawo kukudziridza zvakawanda zvokushandisa zvandinoda kushumira yakareba muushumiri omunharaunda.
Ndiri kuvimba Mwari kuti mazuva akanaka zviri mberi, uye musafunganya - unenge kunzwa zvakawanda kwandiri, kubva achinyorera mimhanzi pakudzidzisa uye pakuparidza. Ndinoonga zvose rutsigiro wako munzira, uye ini kuti uzoyeukawo kwandiri mumugwagwa.
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:42 ndiri • pindura
Izvi zvakadaro haana pachena. Saka asina zvachose ndatomboenda pamudyandigere kubva mumhanzi?
Daniel Blagrove • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:45 ndiri • pindura
Kwete asina achipindira kubva mumhanzi, iye vagotevera yakawanda nguva yake zvidzidzo ake choufudzi kuzvipira kuchechi yekwaanogara
Alex • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 1:14 pm • pindura
Pakutanga Ndaitenda akanga ava nemakore. Ikozvino nguva dzose I kuteerera nziyo ake akare, Ndakafanana… iye kuuya shure, iye nzira yakanyanya kunaka kwete zvakare. Achiri mumwe chandinonamatira Artists.
Cguerrido • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:46 ndiri • pindura
Awesome zvikuru kuona wechiduku anoda vatevere mwari zvokusvika achipindira pasi kubva basa rokuimba chake chikuru kuti kuisa vanamwari shoko somuparidzi uye mufundisi kutanga. Iwe kutoita kuti mimhanzi yako munoziva, zvino ayo ari musicless rwiyo.
Dervanie Charles • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:46 ndiri • pindura
Im kudada Trip,wechiduku chaizvoizvo anowana God.He anowana zvinorehwa wechokwadi mupenyu God.Keep kukwira zvakanaka basa Trip ;)
Antoine Mason • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:46 ndiri • pindura
Ini chokwadi Trip achava Pastor. Anoda Kristu Rap akawandisa. Iye haasi kupa kuti kukwira.
Vinny_uk • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:47 ndiri • pindura
Iye zvechokwadi haadi munhu kuti kutarisa BRO zvakanaka, chokwadi…
Malak • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:47 ndiri • pindura
Ndianiko Munoteerereiko kuti mharidzo? Ndinoona Piper basa kurukana mubasa Reach raMwari, regai chii dzimwe mhando nhamba ukateerera kufuridzirwa / kunzwisisa rugwaro?
Ephraim Franklin • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:47 ndiri • pindura
Tendai Mwari iwe murume. Uri chikomborero.
Ggf2005 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:47 ndiri • pindura
vachida kunzwa iwe taura, mumhanzi wako vashumiri mweya wangu
Malak • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:48 ndiri • pindura
Ari kare mharidzo dzakawanda, unogona kudziwana pamusoro Youtube.
Jeremydaniel95 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:48 ndiri • pindura
iwe kurudziro zvinondirwadza zvakanaka pakuita chisarudzo chero nguva Ini vanoratidza dzimwe mumhanzi yako. zvimwe nyasha!
Judith Amulen • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:49 ndiri • pindura
Ndiri saka akakurudzirwa hasha dzenyu pamusoro Kristu.
Mark Block • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:49 ndiri • pindura
Vanotarisira kunzwa zvakawanda kwauri nokukurumidza, mune chero chimiro kuti chingava.
Marc 1ceDark tyisa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:49 ndiri • pindura
Kutarisira chii Jehovha acharamba kuitei uye kuburikidza iwe, BRO. Excellent.
James Aggrey • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:49 ndiri • pindura
Iyo chechi iri DC here kushumira panguva?
Matt Smethurst • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:50 ndiri • pindura
Anthony_Nickens • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:51 ndiri • pindura
zvechokwadi kunzwisisa, Kusarudzwa mufudzi Anotanga kuboka rake pakarepo. Tiri kuva musangano kuchechi yangu New Church paBheteri Kansas City, Kansas kunyanya zvakatsaurirwa kukwira uye vafundisi kuuya. mufundisi My Suff. Bishop A. Glenn Brady ndiyo yakanaka chipangamazano uye vaneshungu pamusoro kungoita vanhu zvakawanda maropafadzo aMwari upenyu hwavo. Unofanira kutarisa naye pamusoro FB!
Travis Nunnjr40 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:51 ndiri • pindura
Ndinonamata Mutsvene anotungamirira nhanho dzako uye kukutungamirira akakura uye nani zvinhu.
Angela A. Spencer-Mukes • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:51 ndiri • pindura
Chingorangarirai kuti rokuparidza kukurukurirana vhangeri, Zvisinei zvaunoita kuti zvakanaka. Handina nguva dzose kuwana mumhanzi wenyu kuti mharidzo zvinoshamisa. Kakawanda tinofunga kuti munhu 'kufona’ zvinoreva isu kuita mutemo muparidzi basa, kana zvaAri yokusimbisa kwatiri ndiko maoko edu kuwana kuita.
My Ishe vakuropafadzei murambe iwe.
footeus • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:51 ndiri • pindura
Izvi chaizvo hazvina ndakashamisika. Ndinogona kuona kuti ndipo mwoyo kuti dude ari kushevedza. Iye kugara wechokwadi uye ndinonyengetera kuti yepamwoyo kwaari Mwari. Uye kuti iye anogara anozvininipisa. Zviri shamisa kuti ndiri kupfeka ake “Ndinogona kudada Ishe wangu?” wristband. Ndicho ani Ndinoziva achawana kukudzwa uye kuti ndine zvose naro. Handeyi!!!!!
Paul Horne • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:52 ndiri • pindura
Mwari akuropafadzei munin'ina sezvo iwe enda pashure ichi kutozoedza. Ndafara mumhanzi yako nedzidzo yako zvakasimba. Ndinovimba Jehovha anoramba akudzwe kubudikidza nebasa rako.
Taurai: Chii I Read Online – 08/20/2013 (a.m.) | izwi rokuti emeth Aletheia
CherishJesusLuv • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 5:59 ndiri • pindura
Ini ndoenda kure newe Trip.
Hebrews 12:1-2 Naizvozvo kuona nesuwo tiri vakakomba pamusoro negore guru rezvapupu, ngatiregei ngatibvisei mitoro yose, uye nechivi ngaarege nyore vanombonzwa [isu], uye ngatimhanyei nokutsungirira nhangemutange yakaiswa pamberi pedu, Tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi [yedu] kutenda; iye nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake wakatsunga pamuchinjikwa, achizvidza kunyadziswa, uye akagara kuruoko rworudyi rwechigaro choumambo chaMwari.
tina • Nyamavhuvhu 21, 2013 pa 10:48 ndiri • pindura
Nemwi zvose nzira rwendo! Luv kunzwa kubva mumhanzi wako bhuku rako uye mharidzo dzenyu. Dai Ishe wedu Good kuramba akuropafadzei uye mhuri yako.
taona • Gunyana 26, 2013 pa 5:09 pm • pindura
Ini curtu kurira Trip Lee zvikuru uye tinoda kumuona kuimba Brazil.
tenga • Mbudzi 19, 2013 pa 9:22 pm • pindura
mumhanzi Ur kwakarurama zvakare zvakanaka kuti tibvise! mumhanzi wako mharidzo dzenyu…..zvinovhiringidzawo alot mweya kunyange kutosvika kuti havazivi. Irege zvinoratidzwa Album okutengesa, Grammys, kutengeswa kunze zvinoratidza asi kuziva kuti ayo mukubwinya kwake. Kufanana iwe wakati regai kutsvaka kuti boxed hwomutambarakede Jesu, hazvina haapo. Ini achati izvi kana nechivimbo kana rudo mumhanzi anochera mukati menyu mweya zvakakwana, Ndinoziva uchange shure! Funga pamusoro mamishinari vari vakatambudzwa uye kuuraya muzuva rino nezera Kristu…..Ndinoziva vazhinji vavo vaifunga kudzokera kwavo machechi vemo apo pane nyaradzo! Ndivo varwi vakashinga…..varwi….Ndinoyemura kwavari kupfuura dzimwe “watinya” muna Kristu….Ivo zvechokwadi “unashamed”!